Appboy: Ghọta, Nwalee ma tinye ndị ọrụ ekwentị | Martech Zone
Gburugburu ebe obibi mkpanaka agbawaala ihe karịrị 1 nde ngwa ọdịnala na afọ atọ gara aga. Ndị ụlọ ọrụ na-agbasi mgba ike inweta nnweta ndị ọrụ dị elu na ọnụego njide dị ala. Ihe na-erughị 60% nke ngwa ngwa ekwentị na-enye ezigbo nloghachi na itinye ego.
Boymụ nwoke bụ ihe agbakwunyere data na-enyere ndị na-ere ahịa ngwa ngwa iji mepụta profaịlụ onye ọrụ bara ọgaranya na ndị na-ege ha ntị na-ege ntị, wee nye ha ike na ngwaahịa nke ngwaahịa akpaaka ngwaahịa:
Ntughari nkwuputa nye ozi dị mkpa, na-adọ oge ozugbo na ihuenyo nke onye ọrụ gị (ọbụlagodi na ngwa ahụ anaghị arụ ọrụ), na-arịwanye elu njikọ site na 30-60%.
Ntanetị Akụkọ mepụta usoro iji gosipụta ọdịnaya buru ibu na nlele kaadị akọwapụtara na-enweghị nrụgide nke ọkwa ịkwanye na ozi ngwa ngwa.
Na-ngwa ngwa nye ọwa nkwukọrịta iji kwanye ọkwa, mana n'ime ngwa ahụ yana ime mgbanwe ka ukwuu.
email na-enye ụzọ iji kpọtụrụ ndị ọrụ karịrị ngwa mkpanaka gị. Ọnụ ọgụgụ mepere emepe na ekwentị karịrị desktọpụ, ọ dị oke mkpa na email bụrụ akụkụ nke ngwakọta ọtụtụ ọwa gị.
In-ngwa nzaghachi site na mpempe akwụkwọ na nkwado ndị ahịa na-enye ohere profaịlụ nke ndị ọrụ nwere nsogbu ma lebara nsogbu anya ọsọ ọsọ iji belata nyocha nyocha ngwa ahịa na-adịghị mma. Mmekọrịta na mmemme nke atọ dịka Zendesk, Ahịa Desk.com na Olu Ọrụ dị kwa.
Nkewa - gbadoro ma mepụta ọdịnaya akọwapụtara maka mmasị ndị ọrụ.
Nnwale dị iche iche - ike nwalee ụdị dị iche iche gafee ọtụtụ ọwa ozi yana gụnyere ozi ngwa, ozi email na ozi ntanetị.
Ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ ọkachamara dịkwa iji nyere aka hụ na ihe ịga nke ọma, na-eme ka mgbanwe ntụgharị mkpọsa na-agakarị 30%. Appboy ahụla ogo 400% na ọnwa 9 gara aga ma ugbu a, ihe karịrị ndị ahịa 1,000, gụnyere Ederede +, Ndị na-arụ ọrụ n'obodo, GSN, Mkpọchi, Bloomberg, Udi na PopSci.
Tags: umu nwokegeo-ọnọdụgeo-ezubere ichegeotargetingMobile na Mbadamba ụrọmobile ngwa ahịa nkwadoozi mkpanaka ngwaemail mkpanakaahịa efuakpaghị aka ahịa akpakamobile ọtụtụ-ọwamkpado ozi mobamobile push mobilema Ọkwannwale dị iche ichekpọbata ọkwa
Nov 7, 2013 na 6:34 PM
Ihe ikpo okwu na-adọrọ mmasị. Daalụ maka mmeghe a, m ga-achọ ịmụ nke ọma tupu amụma a.